Afrika Mainty · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Aogositra, 2018
Maoritania : Antomotra ny Fifidianana Solombavam-bahoaka, Nosamborin'ny Fitondrana i Biram Dah Abeid, Ilay Mpikatroka Mpanohitra Ny Fanandevozana
Maoritania 31 Aogositra 2018
Na efa nanomboka tamin'ny 1981 aza ny tsy maha-ara-dalàna azy any Maoritania, dia mbola misy foana ny fanandevozana ao amin'ny firenena. Vinavinaina ho ny 20%-n'ny mponina no olona miaina amin'ny fanompoana.
Manerana an'i Afrika Andrefana amin'ity herinandro ity (jolay 2006)
Borkina Faso 31 Aogositra 2018
Atombokontsika amin'ny Under the Acacias izay mibilaogy ny: Osama bin Laden ao Burkina Faso ny fitsidihana bilaogy amin'ity herinandro ity.
Madagasikara: Ireo Nofinofin'ny Hoavy Sy Ireo Hevitra Sasany Mikasika Ny Fanampiana Iraisampirenena Ho An'i Afrika
Madagasikara 31 Aogositra 2018
Zava-dehibe ny hanamarihana fa tsy mandeha aminà zotra tokana hatrany ny fanampiana iraisam-pirenena. Misy ireo ohatra amin'ny fanampiana afrikana mankany Eoropa ary na ireo firenena tena matanjaka erantany aza dia mila fanampiana indraindray.
Rwanda 30 Aogositra 2018
Nizeria 30 Aogositra 2018
Madagasikara: Anglisy teny ofisialy, fanomezam-boninahitra ireo lasibatry ny fifanandrinana ara-panjanahantany sy ny rivodoza
Madagasikara 30 Aogositra 2018
Fenofeno ny vaovao teto Madagasikara tanatin'ny tapabolana faharoan'ny volana marsa 2007: referandaoma fanitsiana ny lalampanorenana nampiditra ny teny anglisy ho teny ofisialy. nanome voninahitra ireo lasibatry ny fitroarana nanoherana ny fanjanahantany tamin'ny taona 1947 izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona 80.000 ihany koa i Madagasikara. Farany, rivodoza fahaenina tanatin'ny enimbolana.
R.D. Kongo: Tsy ho ny farany ilay fianjerana fiaramanidina tao Kinshasa
Marobe ireo orinasa tsy miankina misahana fitaterana an'habakabaka ary dia fasana an-jatony misidintsidina eny an-danitra eny araka izany
Senegal 29 Aogositra 2018